Minaaradda birta korantada birta birta birta birta korontada birta waa nooc ka mid ah qaab-dhismeedka birta kaas oo hayn kara masaafad aamin ah oo udhaxeysa qaboojiyeyaasha taageeraya iyo dhismooyinka dhulka ee khadka gudbinta. Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo kororka degdegga ah ee dhaqaalaha qaranka, warshadaha tamarta ay si deg deg ah u horumartay, taas oo sare u qaadday horumarka degdegga ah ee warshadaha taarikada xariiqda gudbinta. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, dakhliga iibka ee warshadaha taarikada isgaarsiinta ee Shiinaha ayaa ka kordhay 5 bil ...
Sanadihii la soo dhaafay, iyadoo kororka degdegga ah ee dhaqaalaha qaranka, warshadaha tamarta ay si deg deg ah u horumartay, taas oo sare u qaadday horumarka degdegga ah ee warshadaha taarikada xariiqda gudbinta. Sida laga soo xigtay tirakoobyada, dakhliga iibka ee warshadaha taarikada isgaarsiinta ee Shiinaha ayaa ka kordhay 5 bilyan yuan 2003 ilaa 42.6 bilyan yuan 2010, oo leh CAGR 36.68%, iyo warshadaha ayaa ku jirta xilli horumar deg deg ah. Sannadkii 2010, Shiinaha munaaraddiisa xarig-gudbinta ee is-gaarsiinta waxay leedahay isbeddel horumarineed oo wanaagsan, shirkadaha ka shaqeeya warshadaha waxay leeyihiin maareyn iyo awood sarreyn qiime iyo kharash, waxayna leeyihiin faa'iido xoog leh.
Dhamaadka sanadka 2010, 252 xarig isgaarsiinta xarigga gudbinta Shirkadaha ka sarreeya miisaanka Shiinaha ayaa gaaray 32.250 bilyan yuan, koror 25.55% sanadkii sanadkii. In 2010, wadarta qiimaha wax soo saarka warshadaha ee Shiinaha munaaraddii birta ahaa 43.310 bilyan yuan, koror ah 25.36% sanad-on-sano; dakhliga iibka wuxuu ahaa 42.291 bilyan yuan, koror 29.06% sanad-sanad ah; wadarta macaashku wuxuu gaadhay 2.045 bilyan yuan, koror ah 43.09% sannad-sannadeedka.
Inta lagu jiro muddada Qorshaha Shanaad ee 12-aad, Shiinaha wuxuu kordhin doonaa maal-gashiga korantada korontada, iyadoo la maal-gashan doono qiyaastii 2.55 tiriliyan yuan, taasoo u dhiganta 48% wadarta maal-gashiga awoodda, taas oo qiyaastii ah 3.0% ka sarreysa tii shan iyo tobnaad 11 Muddada qorshaha. Iyada oo ay sii kordheyso maal gashiga korontada, baahida loo qabo munaaradda laynka gudbinta sidoo kale si joogto ah ayey u kordheysaa, rajada horumarineed ee warshadaha taarikada xariiqda gudbinta waa mid ballaaran. Heerka kobaca isku dhafan ee sanadlaha ah ee dakhliga iibka ee warshadaha Shiinaha ee xarigga isgaarsiinta waa 28% laga bilaabo 2011 ilaa 2012, waxaana la filayaa in dakhliga iibka ee warshadaha Shiinaha ee xarigga isgaarsiinta uu gaari doono RMB 70.3 bilyan.
Tower Xaraynta Power Steel, Qaab dhismeedka birta tuubada, Taawarrada birta korontada, Tower Tower Xagasha Electric, Qaab dhismeedka Birta Prefab, Taawarka Isgaarsiinta Dowladda Hoose,